महामन्त्री थापा ‘न्यायपालिकाको नेतृत्व बदल्ने गरी जानुपर्छ’
जनताको सवाल उठाउने कुरामा सम्झौता हुँदैन
पुस २९, २०७८ १:३५
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं।जनताको पक्षमा प्रखर आवाज उठाउने परिचय बनाएका नेता हुन् गगनकुमार थापा । तर नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री भएपछि सर्वोच्च अदालतको विवाददेखि सत्ता गठबन्धन लगायत थुप्रै विषयमा थापाको धारणा खोजी भइरहेको छ । तर उनी सार्वजनिक मञ्चहरुमा विगतमा झैं प्रखर नभएको गुनासो छ ।
प्रस्तुत छ, कांग्रेस महामन्त्री थापासँग राजकुमार श्रेष्ठ र सइन्द्र राईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः जनताको पक्षमा प्रखर आवाज उठाउने गगन थापाले कांग्रेस महामन्त्री निर्वाचित भएपछि ‘टोन डाउन’ गरेको हो ? जुन जिम्मेवारीमा छु, त्यो जिम्मेवारीबाट कार्यसम्पादन गर्दा केही कुरामा ध्यान दिनैपर्ने र केही कुरामा सचेत रहनैपर्ने अवस्था छ । जस्तो– हिजो जनसरोकारका कुनै विषयलाई सार्वजनिक मञ्चबाट होस् अथवा राजनीतिक मञ्चबाट फ्याट्टै उठाइदिए पुग्थ्यो । कतिपय सन्दर्भमा प्रश्न मात्रै उठाइदिए पुग्थ्यो । उत्तर दिइरहन पर्दैनथ्यो किनकि बहस गराइदिने जिम्मेवारी थियो ।
महामन्त्री भएपछि कुनै विषय प्रश्न हो भन्ने लाग्दा पार्टीकै प्रश्न बनाउनुपर्नेछ । मैले कुनै प्रस्ताव गर्छु भने त्यो पार्टीकै प्रस्ताव हुनुपर्नेछ । अहिले पनि मेरो दिमागमा दर्जनौं प्रश्न छन् । जस्तो– भारतीय प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकमा सडक विस्तार गर्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो । यसबारे नेपाल सरकारको ‘पोजिसन’ तत्काल देखिनुपर्छ । भारतसँग यो विषय राख्नुपर्छ, नेपाली जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्छ भन्ने छ । हिजो यो विषयमा नेपालका प्रधानमन्त्री बोल्नुपर्छ भनिदिए पुग्थ्यो । आज मेरै पार्टी सभापतिले सरकार चलाइरहनुभएको छ, उहाँलाई यो विषयमा बोल्ने बनाउनु परेको छ । त्यहाँसम्म पुग्न अलिकति समय लाग्ने रहेछ, अलि पेचिलो पनि हुने रहेछ ।
मेरो पोजिसन भने फेरिएको छैन । जनताको सवाल उठाउने कुरामा सम्झौता हुँदैन । प्रश्न गर्ने ठाउँबाट उत्तर दिने वा दिलाउने ठाउँ नजिक पुगेको हुँदा तरिका बदलिने भयो । काम गर्ने तरिका बदलिंदा थोरै अल्मलिएको पनि हुँला । मेरो सभापति प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा भए पनि म पार्टीको महामन्त्री मात्र हुँ, सरकारको मन्त्री होइन । जनताको कुरा सरकारलाई कसरी सुनाउने भन्ने सोचिरहेको छु । अर्का महामन्त्रीसँग पनि छलफल गरिरहेको छु ।
गगन थापाको हिजोको स्पेस अब पनि कायमै रहन्छ कि अरु कसैले लिनुपर्ने भयो ? म नयाँ ठाउँमा गइसकेपछि त्यो स्पेस अरुले लिंदा नै सबैलाई सजिलो हुन्छ । त्यो स्पेस अरु कसैले लिइदेओस्, त्यहाँबाट कसैले प्रश्न उठाओस्, जनदबाव सिर्जना गरोस्, जसले म लगायतलाई परिणाम दिन प्रेरित गरोस् । कुरा उठेको छ, तत्काल समाधान दिनुपर्छ है भन्नका लागि पनि त्यो स्पेस अरु कसैले लिइदियोस् भन्ने चाहन्छु ।
हिजो तपाईंले प्रश्न उठाउँदा जवाफ नआउने बढी हुन्थ्यो, अब ? आज ठाउँ (महामन्त्री पद) मा पुगेको छु, त्यो ठाउँमा मभन्दा अगाडि जिम्मेवारी बोकेर बस्नुभएका नेताहरुको सबल पक्षबाट सिक्छु नै, तर जुन सीमाभित्र बसेर सीमित प्रभावकारिता रह्यो, त्यसलाई पनि बदल्न चाहन्छु । पार्टीको महामन्त्री भएँ, अब केही पनि बोल्न हुन्न, चुप बस्नुपर्छ भन्ने कुरै होइन ।
के हो त्यो बोध ? राज्य सञ्चालनमा असंवेदनशीलता, अयोग्यता, सुस्तता जे–जे देखिए, यी सब दलहरुको चरित्रको प्रतिबिम्ब हो । दलहरुभित्र सुधार भयो भने राजकीय जिम्मेवारीमा बस्नेहरुको व्यवहारमा बदलाव आउँछ, नागरिकले लाभ पाउँछन् । त्यसैले कांग्रेसभित्र सुधार आउँदा खुशी भएको अर्थमा बुझेको छ ।
कांग्रेसको सभापति पछिको कार्यकारी पद महामन्त्रीमा गगन थापा पुगेको अनुभूति अब हुन्छ त ? पार्टीभित्र पाएको म्याण्डेटबाट म उत्साहित छु । सँगै दबावमा पनि छु । पार्टी पंक्तिलाई खुशी बनाउन सजिलो छ । यत्रो वर्षदेखि काम गर्दै आएको हुनाले कस्ता कुराले पार्टीका साथीहरुलाई उत्साहित बनाउन सकिन्छ भन्ने थाहा छ । तर तपाईंले सोध्नु भए जस्तै कांग्रेसमा हामी चुनिएर आउँँदा आम मान्छेमा देखिएको उत्साह कायय राख्नु बढी महत्वपूर्ण हो ।
तर सर्वोच्च अदालत लगायतको मुद्दाका सन्दर्भमा तपाईंको पहिलेको गतिमा गेयर घटेको अनुमान गरिंदैछ । यसले त्यो उत्साहलाई निराशामा बदल्दैन ? गेयर घटाएको होइन भन्ने मेरो दाबी छ । किनकि महामन्त्रीको जिम्मेवारी औपचारिक रुपमा लिएको जम्मा १५–१६ दिन भयो । अदालत, गठबन्धन, संसदकाे गतिरोध, सीमा लगायत यो अवधिका जल्दाबल्दा विषय भए ।
पदीय संरचनाले पनि थिच्दो रहेछ ? हिजो प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा न्यायालयको चार किल्लाभित्र न्याय नमरोस् भन्दै सडकबाट आवाज उठाउनुभयो । न्यायपालिकामा आज पनि उही विवाद छ । संविधान र नागरिकमाथि अन्याय कायम रहे जस्तो लाग्दैन ?
यसअघि पनि प्रतिकूलताहरु चिर्दै आएको हो, अहिले पनि अरु विकल्प छैन । सजिलो पनि छैन । पार्टी सभापतिको अनुभव, बुझाइ र राजनीति गर्ने एक खालको शैली छ । हामी नयाँ आयौं, उहाँका लागि त सभापति पनि पुरानै पद हो । अघिल्लो पटक जस्तै पार्टी सभापति हो उहाँ । उहाँलाई नयाँ केटा आएका छन्, बढी उत्साह होला भन्ने पनि लाग्दो होला । हामी नयाँ ढंगले गर्न चाहने नै भयौं । यो एउटा चुनौती भइहाल्यो ।
महाधिवेशनको परिणामअनुरुप व्यवहार गर्न सभापतिलाई केही समय लाग्न सक्छ । सभापतिभन्दा बाहिरका नेता गणलाई पनि केही समय लाग्ला । हाम्रा लागि पो यत्रा साथीले विश्वास गरेर जिम्मेवारीमा आयौं भन्ने छ, सभापतिमा त हिजोकै निरन्तरता छ । त्यसले अरु केहीलाई पनि आफ्नो निरन्तरता भन्ने लाग्ने भयो । जिम्मेवारीमा नयाँ केटाहरु आए, तर पार्टी चलाउने हामीले नै हो भन्ने लाग्न सक्छ । यसलाई चिरेर जानुपर्नेछ ।
किनकि सबैभन्दा बढी अपेक्षा गर्ने ठाउँमा सभापतिलाई उभ्याएको छ । अभूतपूर्व मत पाएर आउनुभएका उहाँका लागि यो अन्तिम इनिङ पनि हो । महाधिवेशनले नयाँ केटाहरुलाई पनि ठूलो जिम्मेवारी दिएर पठाएको छ । यिनीहरुको कुरा सुन्न सभापति तयार भए धेरै सजिलो हुन्छ ।
सामूहिक नेतृत्वप्रति धेरै ठूलो अपेक्षा छ । सामूहिक नेतृत्व भनेको बाँडफाँट होइन, पार्टीले के सोच्छ, त्यसमा सबैको श्रेय होस् भन्ने हो । सम्वादबाट पार्टी कहाँ उभिने भन्ने तय होस्, हामी सबैले अपनत्व लिन सकियोस् भन्ने हो । पार्टीको निर्णय एकातिर, हामी अर्कोतिर हुने अवस्था नआओस् भन्ने सबै साथीको चाहना छ । त्यहीअनुसार अन्तिम विन्दुसम्म सहकार्य नै गर्ने हो । शुरुआत छ, निराश वा नकारात्मक हुन पनि चाहन्न ।
हामीले समूह नै बनाएर महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्‍यौं । निर्वाचित भएका हामी केही साथीबीच उम्मेदवार भएका सबै एक ठाउँमा बसेर समीक्षा गरौं भनेर सल्लाह भयो । त्यो बेलासम्म राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवार चयन र केन्द्रीय सदस्य मनोनीत भइसक्ने पूर्वानुमान थिएन । हाम्रो बैठक अलि अगाडि भएको भए वा केन्द्रीय मनोनयन र राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार चयन नभएको भए महाधिवेशनकै समीक्षा हुन्थ्यो होला । तर मनोनीत र उम्मेदवार चयन भएकाले केही छलफलका विषय बने ।
म अहिले पनि कसरी सोच्छु भने सभापति सिंगो पार्टीको नेतृत्व गरेर कांग्रेसलाई नयाँ ठाउँमा लैजाने म्यान्डेटसहितको अवसर लिएर आउनुभएको छ । त्यसको समुचित प्रयोग होस् । सभापतिसँग हाम्रो यो अपेक्षा हो । हामीलाई भाग चाहिएन, तर सँगै लिएर जानुहोस् । सँगै काम गर्न चाहन्छौं । आगामी दिनहरुमा सँगै हिंडाउनुहोस् भनेर भनिरहेका छौं । त्यो अवस्था बन्छ भन्ने नै छ ।